Solskjear oo Xilka RIGOORE tuurista Man United ka xayuubiyay Paul Pogba…. (Yaa loo dhiibay??) – Gool FM
Solskjear oo Xilka RIGOORE tuurista Man United ka xayuubiyay Paul Pogba…. (Yaa loo dhiibay??)
(Manchester) 21 Agoosto 2019. Macallinka Manchester United ee Ole Gunner Solskjaer ayaa Pogba ka qaaday rigoore tuurista kooxda kaddib markii uu rigoore khasaariyey kulankii ay Isniinii barbaro 1-1 la galeen Wolves, markii ay u muuqdeen isaga iyo Rashford inay isku qilaafeen cidda tuureysa rigooradaas.
Solskjaer ayaa markii la tagay qolka dharbedelashada kulankaas ee garoonka Molineux waxa uu sheegay in rigoore tuurista kooxda uu qaadanayo Rashford, labadoodana waxa uu ugu qeyliyey inay isku ogolaan waayeen rigoore tuurisa kulanka oo ay isku qabsadeen.
Tababaraha reer Norway ayaa sidoo kale waxa uu la yaabay in iyagoo TV-yada si toos ah adduunka oo dhan looga daawanayo (live) ay qaabkaas garoonka dhexdiisa ugu dhaqmaan.
Pogba ayaa daqiiqadii 68-aad lagu galay rigoorada, labadadooda isaga iyo Rash ayaana iskula dhagay oo mid waliba uu doonayey inuu tuuro gool ku laadkaas, ka hor inta uusan qaadan xiddiga xulkiisa Faransiiska kula guuleystay Koobka Adduunka ee Pogba oo aan laga qaban.
Laakiin Pogba dadaalkiisa rigoore tuurista waa uu bixiyey inkastoo uu gool ku laadkaas ka qabtay goolhaye Rui Patricio, taasoo meesha ka saartay in Manchester United ay gaarto guusheedii labaad oo xiriir ah xilli ciyaareedkan horyaalka Premier League.
Solskjaer si shaacsan uma dhaleeceyn labada ciyaaryahan, waxaana uu Saxaafadda u sheegay kulanka kaddib in labadoodaba loogu talagalay inay rigoorada u tuuraan kooxda.
Yeelkeede, markii la tagay qolka dhar bedelashada macallinka reer Norway ayaa Pogba ka xayuubiyey xilka rigoore tuurista kooxda kaasoo afar mar khasaariyey sagaalkii rigoore ee ugu dambeeyey oo uu tuuray, waxaana lagu wareejiyey Rashford.
Xiddiga xulka qaranka England ee Marcos Rashford ayaana hadda kaddib ahaan doona rigoore tuuraha koowaad ee kooxda Manchester United.
Neymar Jr oo sara u qaaday dooda ka taagan mustaqbalkiisa PSG, kaddib markii uu diray farriin aan caadi aheyn
Maxamed Saalax oo daaha ka rogay fariin uu Klopp u diray ciyaartoyda Liverpool